Factory Tour - Ningbo Samewe Computer Co., Ltd
N ingbo Shuangyu (Samewe), sezvo mumwe thefamous nekombiyuta Flat Knitting Machine vagadziri, kwete chete hanya nhamba yemabhuku kuti tinobudisa asiwo unhu, tine investedquite abig mari iri advancedprocessing equipments kuti dzikurukure machinequality. Tinotora tsvimbo kudzidzisa chakakomba kuitira uye kuvandudza chigadzirwa unhu yacho.
SY52-S chinhu mari uye anobatsira muchina customized nokuda ourclients. Rine zvakanakira kunzwisisa mutengo, kugadzikana unhu andthe pfupi-rokuti recouping kuti guta outlay.The muchina adpots zvakazarakombiyuta raitungamirirwa marongedzero tama, tucking uye anokurumidzangoro anodzoka uyewo injini kudzora marongedzero colorchanging. Rinopa akatsiga kuita uye kumhanya uyeinowana ari mukuru mashandiro, zvakadai intarsia, pachena sticth, zvakanaka-nepakati, waya zvivako, muchinjikwa-Musono, jacquard uye etc..
SY52-2S adpots kuroora anonetsa zvikuru hwakanaka tsono nomuzariro uye hunyambiri rackingfor zvinonyadzisa tsono nemizariro, mukuru-nokukurumidza chaisazvitsigira kuti zvinobudirira kuwedzera thekitting nokukurumidza nezvikamu 20% -30%. Mativi ose grippers cheka
kunoreva zvinobudirira kuderedza tsvina mutsvuku uye kuvandudza productivity.This akatevedzana ari useddigital Michina kuti vabudirire mapatani oftransfer, Tuck, pointelle, intarsia, jacquard, pachena zvinoumba, zvinoumba yakavanzika uye dzimwe tsika dzose kitting mashandiro, izvozvo alsocan yakabatana kwemashifiti multi-mavara jacquard, intarsia, waya uye pointelle mamiriro okunze.
SY52-3S adpots kuroora anonetsa zvikuru hwakanaka tsono nomuzariro uye hunyambiri rackingfor zvinonyadzisa tsono nemizariro, mukuru-nokukurumidza chaisazvitsigira kuti zvinobudirira kuwedzera thekntting nokukurumidza nezvikamu 20% -30%. Mativi ose grippers pamwe achicheka zvinoreva zvinobudirira kuderedza tsvina mutsvuku uye kuvandudza yauinayo. Dzakatevedzana ichi chinoshandiswa digitaalinen Michina kuti vabudirire mifananidzo kutapurirana, Tuck, pointelle, intarsia, jacquard, pachena zvinoumba, zvinoumba zvakavanzika uye dzimwe nguva muenzaniso knitting mashandiro, naicho anogona wakabatanidzwa kutadza multi-mavara jacquard, intarsia, waya uye pointelle mamiriro okunze .
" Hwakanaka, basa Good " nguva dzose yedu tenet uye credo. Tinotora zvose zvavanogona kudzora unhu, pasuru, azoti nezvimwewo uye QC wedu kuongorora zvose panguva kubudisa uye napamberi zvacho. Tiri kuda kumisa refu mabhizimisi ukama nevaya vanotsvaka unhu dzakakwirira zvinhu uye basa rakanaka. Boka redu anotsigira mweya "utsanzi, maererano, chikwata basa uye kugoverana, nzira, pragmatic mberi". Tipei mukana uye ticharatidza kugona kwedu.
Address: Kwete 118 Dzivisa Tai Road, Jiao Chuan Street, Zhenhai District, Ningbo City, China